Nagu saabsan - Suqian Teng'an Qalabka Dhismaha Cusub Co., Ltd.
Suqian Teng'an New Building Material Co., Ltd. waa shirkad casri ah oo ku takhasustay soosaarka iyo iibinta koollada budada ah ee aluminiumka ah. Hadda waxay leedahay qalab wax soo saar oo heer-koowaad ah iyo qalab tijaabo ah oo horumarsan, waxayna lashaqeysaa tikniyoolajiyadda wax soo saarka sayniska iyo hal-abuurka iyo xoogag farsamo oo kale si loo abuuro shirkado caan ku ah budada aluminiumka Shirkado caan ah.
Warshadu waxay inta badan soosaartaa: Jinka budada ah ee aluminium biyo ku saleysan (GLS-70, GLS-65), iyadoo sanadkiiba la soo saaro 10,000 tan. Wax soo saarka waxaa loo soo saaray si waafaqsan si adag shuruudaha Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha heerarka warshadaha, tayada wax soo saarkuna waxay buuxineysaa shuruudaha "JC / T407-2008". Iyo iyadoo loo eegayo qaabeynta kaladuwan ee alaabta ceeriin ee soo saare kasta, tayada alaabtu waa mid aad u habboon iyo shuruudaha farsamo ee ku xusan "JC / T407-2008".
Xakamaynta Tayada oo Fiican
Waxaan leenahay maaraynta tayada xirfadeed iyo kooxda baaritaanka nidaamka.
Adeeg Tayo Sare Sare
In ka yar 2 saacadood baaritaan kasta 24 saacadood maalintii 365 maalmood sanadkii
Waxqabadka Qiimaha Wanaagsan
Jawaab Degdeg ah; Xigasho Xirfadle; Bixinta Degdeg ah; Tayo Sare; Hubinta Ganacsiga.
Manageme tayo fiican leh
Kormeerka ugu horreeya ee alaabta ceeriin ah, baaritaanka tayada waxqabadka, xakamaynta tayada adag kahor bixinta.
Habka wax soo saarka bislaada
Qaaciddada la dhammeeyey ayaa marar badan la xaqiijiyey, oo tayada qaybo badan ayaa loo soo gudbiyey kormeerka.
Shaqaale farsamo yaqaan
Koox farsamo asaasi ah oo ka badan toban qof, celcelis ahaan 10 sano oo khibrad farsamo warshadeed ah.
Wax soosaarka ay soo saarto warshaddeenu waxay dhaafeen kormeerida tayada sanadihii lasoo dhaafay, waxaana shahaado ahaan xubin xubin ka ah Ururka Shiinaha ee Aerated la taaban karo, waxayna abuureen iskaashi muddo dheer soconaya oo la yeelanaya qalabka cusub ee soo saaraha bulukeetiga. Tayada, sumcadda iyo adeeggu waa mabaadi'da warshaddeenna. Iyada oo ku saleysan maareynta oo ay hagayso tikniyoolajiyaddu waa baacsiga wershedeena. Hadafkeenu waa inaan siino macaamiisha wax soo saar tayo sare leh. Buuxinta shuruudaha macaamiisha ayaa ah balanqaadkeena. Aan wada shaqeyno si aan u abuurno berri ka wanaagsan.